Fahatsiarovana ny 7 febroary : samy naka ho azy ireo mpanatitra fehezam-boninkazo | NewsMada
Fahatsiarovana ny 7 febroary : samy naka ho azy ireo mpanatitra fehezam-boninkazo
“Daty iray tsy voakosoka mandrakizay amin’ny tantaram-pirenena ny 7 febroary: namoizana aina sy maritiora maro. Mariky ny fahafahana amin’ny tsy fahalalahana sy ny jadona izany.” Izay ny tenin’ny mpandrindra nasionalin’ny Mapar, Razanamahasoa Christine, taorian’ny fametrahana fehezam-boninkazo eny amin’ny tsangambaton’ireo namoy ny ainy tamin’ny “Raharaha 7 febroary”, Ambohitsorohitra, omaly.
Tsy tapitra ny tolona fa mbola mitohy mandra-pahazoana ny tena fahafahana. Efa nisy fitsarana natao sy didim-pitsarana nivoaka. Any amin’ny tomponandraikitra ny fanatanterahana azy.
Tsy hadinoina izay maty ho an’ny tanindrazana
” Aoka tsy hohadinoina izay maty rehetra ho an’ny tanindrazana manerana an’i Madagasikara, fa tsy izay tamin’ny 7 febroary 2009 ihany”, hoy ny avy amin’ny TFI, iraka sy solontenan’ny antoko Masters, Rasolofo René.
Manao tsinontsinona vahoaka ny olona omena fahafahana tato ho ato: hanosihosy ny marina sy hisambotra mpitolona; omena fahefana aza, hangeja mba tsy hivoaka ny marina. Manjary fomba eto ny hoe maka fahefana hangoronan-karena; avy eo, milefa any ivelany.
Mba tsy hiverina intsony ny 7 febroary…
“Tsy azo hadinoina ireo namoy ny ainy sy naratra teto. Tsy azo fafana eo amin’ny tantaran’ny firenentsika. Irariana ny tsy hiverenan’ny toy ireny intsony”, hoy ny iraky ny filohan’ny Repoblika sady filoha nasionalin’ny HVM, Rakotovao Rivo.
“Tsy mbola tanteraka ny fanovana nimatimatesan’izy namoy ny ainy. Marary ny firenena ankehitriny”, hoy ny avy amin’ny Monina. Nanefa ny fametrahana fehezam-boninkazo koa ny AV 7.
Samy maka ho azy ireo antoko sy fikambanana amin’ny fahatsiarovana ny andron’ny 7 febroary 2009. Tsy miombona sy miaraka intsony hatramin’izao fitondrana izao, fa voasara-bazana tanteraka?